Tag: ezumike infographic | Martech Zone
Kpido: ezumike infographic
Tuesday, February 9, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Splender nyochara ihe karịrị nde azụmahịa anọ na saịtị 800 + iji hụ otú ịzụ ahịa n'ịntanetị na 2015 ma e jiri ya tụnyere 2014. Thanksbọchị Ekele bụ ụbọchị nke atọ kachasị n'ịntanetị nke oge a na kọmputa na kọmputa na-ebute ụzọ na onyinye mana uwe na ngwa na-eduga na uto. Cyber ​​Monday ka bụ ụbọchị ezumike ezumike kachasị ukwuu na ntanetị, yana 6% nke ire ere ezumike. Otú ọ dị, ahịa dị ala 14% kemgbe 2014. N'uche nke m, enwere
Nke ahụ mere. Ee, anyị na-eziga ezumike na ịzụ ahịa ahịa ezumike site na Monetate. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ihe dị ka ụbọchị 100 ruo oge ezumike ahụ dị oke egwu ma ọ bụ oge iji cheta mmetụta nke atụmatụ ahịa gị ugbu a kama ịkwadebe na nkeji ikpeazụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mfe ikwere oge ịzụ oge ezumike na-amalite na ngwụcha izu ike-ma ọ bụ ikekwe na ngwụsị October-ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-ahụ nnukwu mmụba
Tuesday, June 3, 2008 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Ọ dị ka kwa izu, ana m ebudata mmelite ọrụ ọzọ maka Vista. N'oge na-adịbeghị anya, Vista nwere Ọrụ Ngwá Ọrụ n'otu ụbọchị Apple nwere mmelite 10.5.3 maka OS X Leopard. Ebe ọ bụ na melite na agụ owuru, M na a na-enwe tọn mbipụta iji ihe nchọgharị… ma ọ bụ Safari ma ọ bụ Firefox. Taa, ekpebiri m ịtinye Safari ka m hụ ma m ga-edozi ihe a ozugbo. Mgbe m malitere nwụnye, m bụ